Kianin'ny olon-dehibe tompon'andraikitra | Programme Certification amin'ny Internet ho an'ny fiaraha-miasa amin'ny ankizy
Mazava ho azy fa azo atokisana
Programme Certification amin'ny Internet ho an'ny fiaraha-miasa amin'ny ankizy
Ity fampiofanana an-tserasera 20 an-tserasera ity dia ahafahan'ny mpikaroka amin'ny asa hahazoana ny fahaiza-manao ilaina amin'ny fiarahamiasa amin'ireo ankizy ao amin'ny trano fikarakarana zaza manana fahazoan-dàlana ao amin'ny sekoly BC.
Amin'ny alàlan'ny fotoam-pivoriana, dia mitantara ny hevitra fototra momba ny fivoaran'ny zaza hatramin'ny zaza ka hatramin'ny 12 taona tari-dalana, ny fahasalamana, fiarovana ary ny sakafo mahavelona.
Ny governemantan'i British Columbia dia nametraka ny fiofanana ho an'ny olon-dehibe tsirairay avy miasa amin'ny ankizy.
Ity taranja tompon'andraikitra an-tserasera ity dia mandray anjara amin'ny Lalàna momba ny fahazoan-dàlana SM fepetra takian'ny tsirairay hanana 20 farafahakeliny fiofanana momba ny fitaizana ankizy, ao anatin'izany ny fiarovana, ny fampandrosoana ny zaza ary ny sakafo mahasalama mba hiara-miasa amin'ny ankizy.
Ny fampiofanana an-tserasera azo ekena ho an'ny olon-dehibe dia mandray andraikitra amin'ny mpikaroka asa ao SM mba hahazoany ny traikefa ilaina amin'ny fiaraha-miasa amin'ny ankizy. Ny ampahany tsara indrindra dia ny hoe mihetsika ny làlana. Afaka manomboka ny fampianarana ny mpianatra rehefa mety ho azy ireo ary mahavita rehefa vonona. Tsy misy fetra ny fotoana.
Rehefa mahazo fandoavam-bola ny mpianatra dia mahazo mailaka fandraisana miaraka amin'ny torolàlana fidirana. Ny mpianatra dia afaka tsindrio ny rohy eo amin'ny mailaka mba hanombohana fampianarana. Misy fangatahana fanazarana mandritra ny làlana ary misy fanadinana farany azo isafidianana amin'ny farany. Ny ampahany rehetra amin'ny fampianarana dia vita amin'ny Internet, ary tsy misy boky fampiasa fanampiny.
Rehefa vita ny fanadinana farany, ireo mpianatra dia handefasana mailaka fanamarinana ho vita, izay azo ampiasaina hahazoana toeram-piasana any amin'ny trano fikarakarana zaza manana fahazoan-dàlana.
Ny taranja olon-dehibe mandray andraikitra an-tserasera an-tserasera dia tohanan'ny WorkBC. Midika izany fa mety misy ny famatsiam-bola ataon'ny governemanta amin'ny alàlan'ny ivon-toeram-piasana eto an-toerana handray ity taranja ity. Ny mpangataka dia tsy maintsy mpikaroka miasa mavitrika ary mampihatra ho mpanjifan'ny ivon-toeram-piasana eo an-toerana. Tsidiho ny Famatsiam-bolan'ny governemanta pejy ho an'ny antsipirihany bebe kokoa.
Azo alaina ny fampianarana matotra misy andraikitra
amin'ny fiteny 100
Raiso ny tohin'ny olon-dehibe mandray andraikitra an-tserasera amin'ny fiteny nofidinao!
Mampiasà Browser Google Chrome,
ary tsindrio ny bokotra fandikana mavo
eo amin'ny farany ambony pejy.
Azonao atao ny misafidy ny handalina ny fampianarana antserasera amin'ny fiteny tianao.
Kitiho ny rohy eto ambany mba hijery ny lamin'asa amin'ny fiteninao
Lahatsary lesona azo atokisana
Ilay mpampianatra anay
Roxanne Penner dia tompon'ny 4Pillar Early Learning Center any Powell River, BC.
Mpanabe zaza zaza manana fahazoan-dàlana izy, mpanamory ny atrikasa ary mpanazatra ny ECE.
Miasa amin'ny maha mpanazatra fianakaviana azy koa izy ary mavitrika amin'ny maha ray aman-dreny mpitaiza azy amin'ny alàlan'ny ministeran'ny zaza ary fianakaviana mandritra ny 17 taona maro.
Roxanne dia nampianatra ny fahaiza-manao ho an'ny taranja tompon'andraikitra amin'ny alàlan'ny atrikasa mandray andraikitra amin'ny alàlan'ny atrikasa isam-bolana nandritra ny 10.
Ankehitriny ity fampianarana ity dia azo alaina an-tserasera ho an'ireo izay tsy manome alalana azy ireo handray ny fampiofanana manokana.
Ny fampianarana mavitrika ataonay dia raisina an-tserasera amin'ny andiam-pampianarana miaraka amin'ny famakiana mini. Dikan-tena tanteraka ny fampianarana. Ny mpianatra dia afaka manomboka amin'ny fotoana rehetra ary handray ny fanadinana farany rehefa vonona izy ireo. Any am-pamaranana ny mpianatra dia handray fanadinana famaranana farany amin'ny boky an-tserasera, ary handefasana mailaka fanamarinana ho vita. Ny marika mandalo dia 70%, ary misy ny fanadinana afaka miverina mandra-pahafeno ny isa.
Ny mpandray anjara dia tsy maintsy manana 19 farafahakeliny taona mba hisoratra anarana, hamita ny lesona rehetra ary handia ny fanadinana farany miaraka amin'ny marika mahafa-po ahafahana mahazo ny taratasy fanamarinana maha-tompon'andraikitra amin'ny fandraisana andraikitra.
Azafady azafady, omen'ny mpampianatra Roxanne Penner ny tenany amin'ny alàlan'ny mailaka mandritra ny fotoam-pianaranao hamaly ireo fanontaniana azonao.
Testimonial amin'ny làlam-pianarana an-tserasera
Fandaharam-pianarana matotra amin'ny bokin'ny olon-dehibe
Fijoroana vavolombelona amin'ny mpianatra
Ny olon-dehibe ananan'ny olon-dehibe an-tserasera Tsotra be ny lisitry ny fianarana hiditra sy vita! Eo am-piandohana ka hatramin'ny fanatanterahana ny fampianarana dia fampahalalana be dia be ary tsotra arahina.
Roxanne amin'ny maha mpampianatra azy dia tsara! Niverina tany amin'ny mailaka haingana aho, ary vonona hamaly ireo fanontaniako rehefa misy ahy.
Ny tena tiako indrindra momba ny fampianarana dia ny halaliny. Izy io aza dia mandehandeha amin'ny fomba fiasa miaraka amin'ireo ankizy manana filàna ara-pahasalamana hafa, izay heveriko fa manan-danja ho an'ny olona miditra eny an-tsaha.
Rehefa vita ny fampianarana matotra ary handray ny fanadinana dia mahatoky aho fa afaka hanatontosa ny asako vaovao miaraka amin'ny fahatakarana tsara ny fomba maha olom-dehibe tomponandraikitra.
Posible ho an'ny asa
Rehefa vita ny fampianarana tompon'andraikitra amin'ny maha-tompon'andraikitra dia mahafeno fepetra hiasa miaraka amin'ny:
Sekoly an-kilasin'ny ankizy taona (lisansa)
Fampiasana fikarakarana ankizy (fahazoan-dàlana)
Ho fanoloana na mpisolo toerana / fiantsoana ho an'ny Mpanampy amin'ny Fanabeazana ho an'ny ankizy ao amin'ny Vondron-jaza momba ny fiofanana momba ny zaza na lisea
Programa Drop-In programam-pianakaviana, Mpanampy Ankizy Fianakaviana na mpanampy hafa
Fanombohana ivontoerana fikarakarana fianakaviana
Nanny na mitaiza
Zaza an-tserasera $ 125
Ny 4Pillar Early Learning dia mirehareha amin'ny fanomezana antoka 100% Satisfaction Satisment momba ny lamin'asa lehibe tompon'andraikitra eto amin'ny Internet.
Raha misy antony tsy mahafaly anao ny fiofanana dia hamerenay aminao izahay amin'ny fividiananao.
Azafady, azafady fa tsy havoaka ireo mari-pankasitrahana ho an'ireo taranja nolerena
Fijoroana ho vavolombelona momba ny mpianatra bebe kokoa
Manoro hevitra mafy aho fa i Roxanne Penner no mpampianatra ny taranja tompon'andraikitra lehibe.
Mpampianatra tena mandinika sy tia fatratra izy ary mankafy tsara ny saha izay ifandraisany. Nahafinaritra ny nifandray taminy.
Niara-nianatra ilay andraikitra tompon'andraikitra lehibe aho ary hitako fa feno fampahalalam-baovao. Roxanne Penner nampifaly ireo kilasy ary nianatra tamin'ny alàlan'ny fomba fampianarany izy.
Manoro hevitra mafy aho ny hisoratra anarana amin'ity taranja ity.
Ny lesona tompon'andraikitra amin'ny olon-dehibe ho an'ny olon-dehibe dia tokoa. Tiako fa misy i Roxanne hamaly izay fanontaniana ananako teny an-dalana.
Nahazo ny taratasy fanamarinana nataoko aho raha vantany vao vita ny fampianarana, izay nanampy nandritra ny fangatahana asa ho an'ny fikarakarana ankizy.